သကျဦး: January 2009
၂၀၀၉ ခုနှစ်၏ ဇန်န၀ါရီလ ပထမပတ်၌ ကျနော့်စက်ရုံမှာ အလုပ်တွေ ပါးနေသည်။ သံပြားခေါက်သည့် စက်ပျက်နေသောကြောင့် ကျနော်တို့ ဂဟေဆော်သည့် ဖက်သို့ ပစ္စည်းတွေ ရောက်မလာ။ ကျနော်လည်း စက်ရုံမှာ လုပ်စရာ မရှိလျှင် အိမ်ကို စောစောပြန်လေသည်။ အဲလိုစောစောပြန်ပေမယ့် ကျနော့်လစာကတော့ ပုံမှန်ပဲ ဖြစ်သည်။ တပတ်လျှင် ၃၇ နာရီဆင်းရမည်ဖြစ်သော်လည်း အလုပ်မရှိ၍ အိမ်စောစောပြန်သည့်အခါ ကျနော်လိုသွားသည့် နာရီတွေကို စက်ရုံက မှတ်ထားသည်။ နောက်တော့မှ အနုတ်ပြနေသည့် နာရီတွေကို ပြန်ဖြည့်ဆင်းပေးရတော့မည်။
ဒုတိယပတ်မှာ လုပ်စရာနည်းနည်းပါးပါး ရောက်လာပြီဆိုတော့ အိမ်ကိုစောပြန်စရာ မလိုတော့။ သို့သော်လည်း ထိုဒုတိယပတ်၏ ဒုတိယနေ့ဖြစ်သည့် အင်္ဂါနေ့မှာ ပြဿနာပေါ်တော့သည်။ မနက်ကိုးနာရီ အလုပ်နားချိန် စက်ရုံ ကင်တင်းမှာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ၏ ကိုယ်စားလှယ် (ဒိန်းမတ်အခေါ် Tillidsmand) က စကားထပြောသည်။ သူပြောနေတာ တွေကို ကျနော် နားမလည်ပါ။ ကိုယ့်အလုပ်နေရာကို ပြန်ရောက်မှ ကျနော့်ဘေးက ဒိန်းမတ် အလုပ်သမားတယောက်ကို ခုနက ဟိုလူ ဘာတွေပြောနေတာလဲဟု မေးရသည်။ ဒီတော့ သူက ဒီနေ့ အလုပ်သမား ၁၇ ယောက် အလုပ်ဖြုတ်တော့ မယ်လို့ ပြောနေတာ။ ဘယ်သူတွေ ပြုတ်မလဲဆိုတာ ဒီညနေမှာ ဌာနတာဝန်ခံတွေက ပြုတ်မဲ့သူကို လာအကြောင်း ကြားလိမ့်မယ်ဟု ဆိုလေသည်။ ဒီနေ့ အလုပ်ပြုတ်မည့်သူ ၁၇ ယောက်ထဲမှာ ကိုယ်လည်း ပါနိုင်တယ်ဆိုတာကို စိတ်က သိလိုက်ပေမယ့် ကိုယ်လုပ်စရာ ရှိတာကိုပဲ ဟန်မပျက် လုပ်နေလိုက်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ အလုပ်သမားတချို့ ဟိုနား တစု ဒီနားတစု စကားစမြည် ရပ်ပြောနေတာကလွဲလို့ ထူးထူးခြားခြား ဘာမှမရှိ။ အားလုံးပုံမှန်ပင်။ ဒီလိုနှင့် ညနေ အလုပ်ဖြုတ်ခါနီး လက်ဆေးနေသည့် အချိန်အထိ ဘယ်သူတွေ အလုပ်ပြုတ်သွားပြီလဲ၊ ငါတို့ဌာနက ဘယ်သူတွေ ပါသွားပြီလဲ ကျနော်မသိသေး။ မကောင်းသတင်းကို တယောက်ချင်းလိုက်မေးနေလို့ကလည်း မကောင်း။ လက်ဆေးပြီးလို့ ပြန်ခါနီး အချိန်ကျမှ ကျနော့်ဘေးမှ အလုပ်ပြုတ်မည့်သတင်း ကျနော့်ကို ပြန်ရှင်းပြသည့်သူက `မနက်ဖန် ငါလာစရာ မလိုတော့ဘူး။ ငါအလုပ်နားသွားပြီ´ Jeg er fri i morgen. Jeg kommer ikke mere. ဟု ပြောလေသည်။
အခုတလော နေရာတိုင်းမှာ လူတွေလျှော့နေသည်မို့ အလုပ်ပြုတ်သွားသူတွေ အလုပ်ပြန်ရှာဖို့ ခက်ပေတော့မည်။ အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေမှာ အလုပ်ပြုတ်အာမခံ A’ kasse ၀င်ထားသူတွေအတွက် ခံသာသော်လည်း တချို့နေရာတွေ မှာ အလုပ်ပြုတ်အာမခံ မရှိကြဟုလည်း ကြားနေရသည်။ ယခင် ဒိန်းမတ်မှာ အလုပ်အကိုင်တွေကောင်းစဉ်ကတော့ ဂျာမန်တွေ၊ ပိုလန်တွေ အလုပ်လာလုပ်ကြသည်။ ယခုလို ဒိန်းမတ်တွေပါ အလုပ်တွေ ပြုတ်ကုန်ပြီဆိုတော့ နိုင်ငံခြားက အလုပ်လာလုပ်သူတွေ အိမ်ပြန်ကြရတော့မည်။
တိုင်းပြည်မှာ လူအများ ကြုံတွေ့ခံစားနေရသည်များကို ဖြေရှင်းပေးရန် တာဝန်ရှိသူများ ဖြစ်သည့် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့၊ အတိုက်အခံ ပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ အစရှိသူများက စီးပွားရေးကျဆင်းနေသည့် ကိစ္စများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေကြသည် များကို ဒိန်းမတ်သတင်းများ အရ သိနေရသည်။
မြန်မာပြည်မှာရော တာဝန်ရှိသူ အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖြေရှင်းပေးပါသလား။ လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေသည့် အစိုးရ သက်တမ်းကရော ဘယ်တော့ကုန်မှာလဲ။ စစ်တပ်က ဘယ်တော့မှ ဘားတိုက်ကို မပြန်တော့ဘူးလား။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရော တသက်လုံးဖမ်းထားတော့မှာလား။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့် ရွှေဝါရောင်သံဃာတွေကိုရော နယ်စွန်နယ်ဖျားပို့ပြီး အသေသတ်နေပြီလား။ တိုင်းပြည်ကို လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေသူများ၌ တာဝန်ရှိပါသည်။ ဘားတိုက်ကို မပြန်ချင်တော့သည့် စစ်တပ်ကို စီးပွားရေးကပ်နှင့်အတူ တပါတည်း တွန်းချလိုက်နိုင်လိုက်မည် ဆိုလျှင်တော့… မြန်မာပြည် ပြန်လည် ဦးမော့ လာနိုင်သေးသည် ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။ ။
Posted by Thet Oo at 7:46 AM5comments:
၁၉၆၃ ခု၊ အောက်တိုဘာ (၁) ရက်နေ့တွင် တော်လှန်ရေးအစိုးရ၏ အာဘော်ဖြစ်သော လုပ်သား ပြည်သူ့နေ့စဉ်သတင်းစာကို စတင်ထုတ်ဝေသည်။ တော်လှန်ရေးအစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များအဖို့ သတင်းစာ အမည်အတွက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ စဉ်းစားရလေသည်။ အစိုးရက ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေး စနစ်သို့ ချီတက်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်စဉ်က အရှေ့ကွန်မြူနစ်တို့၏ စနစ်မဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့မူနှင့် လုပ်ဆောင်မည်ဟု ကြေညာခဲ့သောကြောင့် လက်ရှိ ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံများမှ သတင်းစာများ အမည်နှင့် မတူသော အမည်ကို ရှာဖွေကြရသည်။
လုပ်သားသတင်းစာဟု အမည်ပေးလျှင် ဥရောပကွန်မြူနစ်နိုင်ငံ သတင်းစာများနှင့် အမည်တူ ဖြစ်နေသည်ကို ကြောက်ကြသည်။ ပြည်သူ့နေ့စဉ်ဟု မှည့်ခေါ်ပါက တရုတ်ပြည် နောက်လိုက်ဖြစ်မည် ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် လုပ်သားပြည်သူ့သတင်းစာဟု အမည်ဆန်းပေးကြသည်။ သတင်းစာအယ်ဒီ တာချုပ်အဖြစ် ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်းကို ခန့်ထားသည်။ ၀တ္တုဘာသာပြန် ပါရဂူဆရာကြီးသည် မန္တလေး လူထုသတင်းစာတွင် လက်ဝဲယိုင်သော ခေါင်းဆောင်များကို* ပြောင်မြောက်စွာ ရေးသားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီး လက်အောက်မှ မြို့ ပြ အယ်ဒီတာ (သို့မဟုတ်) သတင်းအယ်ဒီတာရာထူးနှင့် အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်ရာထူးများကို လက်နက်ချ အလံဖြူ၊ အလံနီကွန်မြူနစ်များက အရှက်မဲ့စွာ ၀င်လုခဲ့ ကြသည်။
သတင်းစာ ထွက်စကာလက စာပေဗိမာန် ဦးထင်ကြီး၊ သံတော်ဆင့် ဦးမောင်မောင်ကြည်တို့ကို အစိုးရ က ခေါ်ပြီး အပ်သည်။ သူတို့သည် သတင်းစာပညာရှင်များ ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် လက်အောက်မှ လက်နက်ချသူများက သတင်းစာထွက်မရစေရန် စာမူများကို ဖျောက်ကြသည်။ ဓာတ်ပုံဘလောက်များ ကို ခိုးဝှက်ကြသည်။ အမျိုးမျိုး နှောက်ယှက်ကြသဖြင့် သမရိုးကျ သတင်းစာဆရာများ လက်မြှောက်ပြီး ထွက်သွားကြရသည်။ ဤတွင်မှ ကွန်မြူနစ်များသည် မင်းက ဘယ်နေရာယူ၊ ငါက ဘာလုပ်မယ်ဟု ဝေစုခြွဲ့ပီး အပိုင်စီးကြသည်။
`သတင်းစာ သြဇာဆိုတာ အာဏာရဲ့ လှေကားထစ်ပဲ ဆိုတာ စစ်ဗိုလ်တွေ နားမလည်ကြပါဘူး။ သတင်းစာတွေကို တို့များ လက်မှာ ရှိရမယ်´ ဟု လက်နက်ချများက လမ်းစဉ်ချကြသည်။ သမရိုးကျ သတင်းစာဆရာများကို သူတို့က ကျောင်းဟောင်းတွေဟု ခေါ်၏။ ကျောင်းဟောင်းတွေ နေရာမရ စေရန် စစ်ဗိုလ်ကြီးများကို ချော့မော့ပေါင်းသင်းကြသည်။ ကျောင်းဟောင်းများ ၀င်လာပါက စစ်ဗိုလ် များနှင့် ရန်တိုက်ပေးကြသည်။
သူတို့ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း တော်လှန်ရေးအစိုးရခေတ်နှင့် မဆလခေတ်တွင် သတင်းစာလောက တခုလုံး လက်နက်ချများ၏ လက်တွင်းသို့ ရောက်ရှိသွား၏။ ခက်သည်မှာ သူတို့က များသောအားဖြင့် စာအရေးအသား ညံ့ဖျင်းကြသည်။ ထို့ပြင် ပြတ်ပြတ်သားသား မရေးဝံ့ကြ။ ထို့ကြောင့် စစ်ဗိုလ်ကြီးများ အား နဖူးပွန်းလောက်အောင် ဒူးထောက်နေကြသဖြင့် ရာထူးကြီးများသာ ရရှိပြီး သြဇာမရရှာကြပါပေ။ ယင်းကဲ့သို့ မင်းလိုလိုက် မင်းကြိုက်ကို ရေးတတ်ကြသော ကွန်မြူနစ်သတင်းစာဆရာ လက်သစ်များ လက်တည့်စမ်းကြသောကြောင့် လုပ်သားပြည်သူ့နေ့စဉ် သတင်းစာကို လူထုက စိတ်ဝင်စားမှု မရှိဘဲ ကျောခိုင်းကြသည်။
လုပ်သားသတင်းစာက ကြေးမုံ၊ ဟံသာဝတီတို့ထက် စာမျက်နှာ နှစ်ဆ ထူရုံသာမက အရွယ်ကလည်း နှစ်ဆကြီးသည်။ ကုန်ထုပ်စက္ကူ ရှားပါးနေပြီဖြစ်သဖြင့် လုပ်သားကို တလ (၇)ကျပ်နှင့် လကြည့်ဝယ် ပြီး လကုန်တွင် စက္ကူပြန်ရောင်းလျှင် (၈ - ၉) ကျပ် ရနိုင်ပါလျက် လူထုက မ၀ယ်ဖတ်ကြပေ။ လုပ်သားက စောင်ရေ (၁၀၀၀၀)ခန့်သာ ရောင်းရပြီး၊ ကြေးမုံက (၅) ဆပိုမို ရောင်းရသည်။ လုပ်သား အင်္ဂလိပ်သတင်းစာ Working People’s Daily ထွက်လာသောအခါတွင်မူ လူထုက လက်ခံအားပေး ကြသည်။ Guardian အင်္ဂလိပ်သတင်းစာသည် ဒေါက်တာမောင်မောင်ပိုင်သည့် သတင်းစာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆရာမောင်မောင် ပညာတော်သင်ဆု ရသဖြင့် အမေရိကန်သို့ သွားသောအခါတွင် စစ်တပ်၏ လျှို့ဝှက်ရန်ပုံငွေနှင့် ၀ယ်ယူပြီး ဗိုလ်မှူးကြီး (၃)ဦးပိုင်အဖြစ် ဆက်လက်ထုတ်ဝေခဲ့သဖြင့် စစ်တပ်ပိုင် သတင်းစာ စစ်စစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းက မျက်နှာကြောမတည့် သောကြောင့် အစိုးရပိုင် အင်္ဂလိပ်သတင်းစာထုတ်ရန် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးအား အမိန့်ပေးကြောင်း သိရသည်။ အမိန့်အရ Working People’s Daily သတင်းစာကို ၁၉၆၄ ခု၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၂) ရက်တွင် စတင်ထုတ်ဝေသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဆရာဦးခင်မောင်လတ်အား အယ်ဒီတာချုပ်၊ ဇနီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ကို လက်ထောက်အယ်ဒီတာအဖြစ် ခန့်ထားသည်။ ကွန်မြူနစ်လက်နက်ချ လောကတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာရေးတတ်သူ နည်းပါးသောကြောင့် အင်္ဂလိပ်သတင်းစာသို့ များများ မ၀င်နိုင် သောကြောင့် ဆရာဦးခင်မောင်လတ်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။
Working People’s Daily ထွက်လာသည်နှင့် ထိုစဉ်က လက်ငင်းရင်ဆိုင်နေကြရသော စီးပွားရေး အခက်အခဲများကို ဆရာဦးခင်မောင်လတ်က ပွင့်လင်းစွာ ဝေဖန်ရေးသားသည်။ တခါက တရုတ်ပြည် တွင် ပန်းတိုင်းပွင့်ပါစေဟု လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်ပြုခဲ့သကဲ့သို့ လုပ်သားပြည်သူများ မိမိတို့ ထင်မြင် ချက်များကို လွတ်လပ်စွာ တင်ပြကြပါဟု ပြန်ကြားရေးဌာနက ဖိတ်ခေါ်သောအခါ အင်္ဂလိပ်စာတတ် များက မြန်မာလမ်းစဉ် ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေး စနစ်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဝေဖန်ပြစ်တင်သော စာများ ရေးသား ပေးပို့ကြသည်။ ယင်းဝေဖန်ချက်များကို ပုံနှိပ်ပေးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်လုပ်သား မဟာစောင်ရေ တိုးတက်ရောင်းချရသည်။ မြန်မာလုပ်သားသတင်းစာမှာ ကွန်မြူနစ် အယ်ဒီတာများက လူထုပေးစာ မှန်သမျှကို ပုံနှိပ်ရန် သတ္တိမရှိသောကြောင့် စောင်ရေမတက်ပေ။ စောင်ရေတိုးသည် ဆိုပေမယ့် Working People’s Daily သတင်းစာက ဦးလောရုံ Nation ၏ စောင်ရေကို မမီခြင်း၊ မြန်မာလုပ်သား က အရှူံးခံပြီး စာမျက်နှာ နှစ်ဆထုတ်ပါလျက် ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာများ ရောင်းချကြရသည့် စောင်ရေ ၏ အောက်သို့ ရောက်ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းက စိတ်မကြည်ဟု ကြားရသည်။
အစိုးရက တခုခုလုပ်လေမည်ဟု မျှော်လင့်ကြသည့်အတိုင်း အရပ်သားပိုင် သတင်းစာတွေကို အစိုးရက ဖိအားပေးလေတော့သည်။ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း၏ အမြတ်ခွန်နှုန်းကို ပြင်သည်။ အမြင့်ဆုံး ၀င်ငွေကို အမြတ်တော်ခွန်နှုန်းထားကို (၉၉) ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြှင့်လိုက်သည်။ ခေတ်ရှေ့ပြေး အင်္ဂလိပ်စာဖြစ်သော Nation သတင်းစာစက်နှင့် တိုက်ကိုလည်း သိမ်းလိုက်လေသောကြောင့် ၁၉၆၄ ခု၊ မတ်လမှာ ရပ်စဲရရှာသည်။
ကြေးမုံသတင်းစာကို အခွန်ရုံးသို့ တင်ပြသည့် စာရင်းများကို လက်မခံဘဲ ဒဏ်ငွေ ကျပ်နှစ်သိန်း တကြိမ်တည်းပေးစေဟု စီရင်ချက်ချသည်။ ထိုအချိန်က ငွေကျပ်နှစ်သိန်းမှာ တရင်းတနှီးကြီး ဖြစ်သဖြင့် ပေးဆောင်ရန် ခက်နေခဲ့သည်။ ကံအားလျော်စွာ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အထူးအရာရှိ အဖြစ် ဦးဘညိမ်းရောက်လာသည့် အချိန်တွင် အခွန်တော်အမှု ဖြစ်ရသည်။ ဦးဘညိမ်း အတွင်းဝန် ရာထူးမှ ထွက်ပြီး အလုပ်သမား လယ်သမားပါတီ တည်ထောင်စဉ်က စာရေးသူက သူတို့ပါတီကို နေ့စဉ်ဝင်ထွက်ခဲ့သဖြင့် ရင်းနှီးရုံသာမက ဦးဘညိမ်းက ကြေးမုံတွင် မကြာခဏ ဆောင်းပါးရေးနေသူ ဖြစ်လေသောကြောင့် `ဆောင်းပါးရှင်ကြီးရယ် … ကူပါဦး၊ ကယ်ပါဦး´ ဟု သူ့ကို ကပ်လေမှ လဆိုင်းနှင့် ပေးဆောင်စေဟု အမိန့်ကို ပြင်ပေးသဖြင့် ကြေးမုံအဖို့ အသက်ဆက်ရပြန်နိုင်သည်။
Nation ရပ်သွားသောအခါတွင် Working People’s Daily အဖို့ လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြသော အယ်ဒီတာထံ ပေးစာများကြောင့် စောင်ရေတက်လာသည်။ Guardian ထက် စောင်ရေ များလာသည်။ သို့သော် ပန်းပွင့်များမှ ကြိုင်လှိုင်သော ရနံ့ကြူကြူကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက ပုပ်စော်နံသည်ဟု ယူဆသည်ဟု ကြားရသည်။ အယ်ဒီတာကြီး ဦးခင်မောင်လတ်အဖို့ သက်ဆိုး မရှည်ရှာပေ။
ဆရာဦးခင်မောင်လတ်အား ဗိုလ်နေ၀င်းက ခေါ်တွေ့ပြီး `ဆရာကြီး၊ သံအမတ်ရာထူး ယူပါလား´ ဟု ရာထူးပြောင်းလဲ ခန့်ထားသောအခါတွင် `ကျနော် သံအမတ်မလုပ်ချင်ဘူး၊ သတင်းစာဆရာဘ၀ကို ပျော်တယ်။ မကျေနပ်လျှင် ထွက်ပေးမယ်´ ဟု ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောပြီး အယ်ဒီတာချုပ်ရာထူးမှ ထွက်လိုက် သည်။ အစိုးရ သံအမတ်ရာထူးနှင့် ချီးမြှင့်သည်ကို သတင်းစာဆရာများက မက်မောလေ့မရှိပေ။ စစ်ဗိုလ်များသာ ငမ်းငမ်းတက် မက်မောကြလေ့ရှိသည်။ ဆရာတက်တိုး၊ ဦးအုန်းဖေတို့လည်း သံအမတ်ခန့်သည်ကို ငြင်းခဲ့သည်။ သတ္တိခဲ ဆရာဦးခင်မောင်လတ်ကို ထုတ်သောနေ့က မြန်မာလုပ်သားသတင်းစာတွင် စာရေးသူက ဆောင်းပါးတစောင်ရေးပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့၏။
တရံရောအခါမှာ ဖုန်းတောင်းစားတဦးဟာ တခုသော တောစပ်မှာရှိတဲ့ ဇရပ်တဆောင်မှာ ထိုင်နေခိုက် နေပူထဲတွင် မြက်ထုံးကြီးတထုံးကို ပင်ပန်းစွာ ထမ်းပိုးတခုနှင့် ထမ်းလာတဲ့ သူဌေးသားတယောက် ၀င်ရောက်လာတာကို တွေ့ရသတဲ့။
မောပန်းနေတဲ့ သဌေးသား အပန်းဖြေပြီး ပြန်ထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်တော့ လာစဉ်ကအတိုင်း မြက်ထုံးကြီးကို တထုံးတည်းစည်းထုံးပြီး ထမ်းပိုးတဘက်မှာ တင်ချိတ်ကာ တစောင်းထမ်းပြန်တာ တွေ့တာကြောင့် အကြံပေးမိသတဲ့။
`အမောင်၊ ထမ်းပိုးမှာ မြက်ထုံးတခုတည်းကို ချိတ်ကာ တစောင်းထမ်းမည့်အစား မြက်များကို အညီအမျှ နှစ်ထုံးခွဲစည်းပြီး ထမ်းပိုး တဘက်တချက်မှာ ချိတ်ကာ ထမ်းပါက များစွာ သက်သာပေမည် မဟုတ်ပါလား။´ အဲဒီလို အကြံပေးတာကို သူဌေးသားက အတန်ကြာ စဉ်းစားပါသတဲ့။ သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးမှ သူဌေးသားက အဖြေပေးသတဲ့။
`အချင်း ဖုန်းတောင်းစား၊ သင်ပြောသော အကြံသည် ကောင်း၏။ မှန်၏။ မြက်များကို နှစ်စု၊ နှစ်ထုံးခွဲစည်းကာ ထမ်းလျှင် များစွာ သက်သာမည်မှာ မှန်ပေ၏´ လို့ ၀န်ခံသတဲ့။
အဲဒီလို ၀န်ခံပေမယ့် သူဌေးသားက မြက်ထုံးကြီးကို ပြင်ဆင်စည်းနှောင်ခြင်း မပြုဘဲ လာရောက်စဉ်က အတိုင်း တထုံးတည်းကိုသာ ထမ်းပိုးမှာ ချီတင်ပြီး တစောင်းထမ်းကာ ပင်ပန်းတကြီး ခရီးဆက်လေ သတဲ့။ ဆက်မသွားမီ သူဌေးသားက ပြောကြားတာက `အဘယ် ဖုန်းတောင်းစား … သင်ပေးသော အကြံ ကောင်းသည်မှာ မှန်၏။ သို့သော် သင်သည် သူတောင်းစားသာ ဖြစ်ချေ၏။ ငါကား သူဌေးသား ဖြစ်ပေသည်။ သူဌေးသားတဦးက သူတောင်းစားပေးသော အကြံကို နာယူလက်ခံလျှင် ရာဇ၀င် ရိုင်းချေမည်။ ထိုကြောင့် မည်မျှ ပင်ပန်းစေကာမူ ငါသည် မူလက ထမ်းသည့်နည်းအတိုင်း ထမ်းပေအံ့´ တဲ့။ ။
Posted by Thet Oo at 9:15 PM No comments:
(၂၂) မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်နှင့် သတင်းစာများထိပ်တိုက် (ကြေးမုံဦးသောင်း)
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီး ပါတီဝင် (၂၀) နှင့် တည်ထောင်ခဲ့သည့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီကို လူထုပါတီအဖြစ် စည်းရုံးရေးကို ဇူလိုင်လ (၄) ရက်က စတင်သောအခါတွင် ကြံကြံဖန်ဖန် ပါတီဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံများကို လာရောက်ယူကြပါဟု စီစဉ်သည်။ လူထုကြီးက အရှိန်အဟုတ်ပြင်းစွာ အင်တိုက်အားတိုက် လာကြမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသောကြောင့် အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းရေးတပ်များကို အသင့်ပြင် ထားကြပါသေးသည်။
“ငညို့အထင်နှင့် နှမ်းထွက်မကိုက်” ဟူသော စကားပုံကဲ့သို့ လက်တဆုပ်ခန့်သာ ရှိသော လူဦးရေအနည်းငယ် သာ တဖွဲဖွဲ ဂတ်တဲများသို့ လာပြီး ပုံစံတောင်းကြသည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီက စာပေလောကသားအများ ၀င်လာကြလေမည်ဟု မျှော်လင့်ထားစေကာမူ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြသဖြင့် မလာကြသောကြောင့် တနည်းတဖုံ စည်းရုံးပြန်ပါသည်။
နိုဝင်ဘာ (၁၇) ရက်နေ့တွင် (၄) ရက်တာ စာပေနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးကို တော်လှန်ရေးကောင်စီက ဦးစီးကျင်းပ ပါသည်။ ပါတီသစ်ဖွဲ့စည်းသည်ကို ပထစ၊ ပမညတနှင့် တည်မြဲဖဆပလတို့က တာဝန်ကျေစွာ ထောက်ခံကြိုဆို ပြီးကြပါပြီ။ စာပေပွဲတော်တွင် သဘာပတိဆရာ သိန်းဖေမြင့်က ထောက်ခံကြောင်းကြေညာပါသည်။ လက်ဝဲခေါင်းဆောင် ဆရာသိန်းဖေမြင့်က တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ မူဝါဒကို အမှန်တကယ် ယုံကြည်သော ကြောင့် သူပိုင်သည့် ဗိုလ်တထောင်သတင်းစာကို လှူဒါန်းပြီး ဆောင်းပါးရှင်အဖြစ် အလုပ်အကျွေးပြုပါသည်။ အစိုးရကလည်း သူ့ကို တော်လှန်ရေးကောင်စီ အတိုင်ပင်ခံ အဖွဲ့လူကြီးအဆင့်ထိ မြှောက်စားခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်း စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများ တွေ့ကြရသည့်ခေတ်၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် သူ့အား ဆောင်းပါးရေးခွင့် မပြုတော့ဘဲ နှုတ်ပိတ်လိုက်ပါသည်။
အစိုးရဘက်က ဗိုလ်မှူးကြီးဘိုက “စာနယ်ဇင်းတို့ ဘာတွေရေးကြရမယ်လို့ အစိုးရက ညွှန်ကြားမှု မပြုပါဘူး။ အချိန်ကာလအရ ပြောင်းလဲ ချီတက်နေတဲ့ နိုင်ငံရဲ့လမ်းစဉ်ကို အထောက်အကူ ပြုကြပါ” ဟု မေတ္တာ ရပ်ပါ၏။
ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်သူ (၇၀၀) တို့အနက် (၂၁၀) တို့က မိမိတို့ အယူအဆကို တင်ခွင့်ရကြသဖြင့် ဆရာကြီး ဇေယျက “လွတ်လပ်စွာ တွေးပြီး၊ လွတ်လပ်စွာရေးမှသာ စာကောင်းပေမွန် ထွက်လာနိုင်ပါသည်” ဟု တင်ပြ သကဲ့သို့ အားလုံးက လွတ်လပ်ခွင့်ကို တောင်းကြလေသည်။
ဆွေးနွေးပွဲကြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်မထွက်လာဘဲ စာရေးဆရာများ အလုပ်သမား လယ်သမားတို့ထံ သွားရောက် လေ့လာလိုက အစိုးရက စရိတ်ကူညီမည်ဟူသည့် အစီအစဉ်တခုသာ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ဆရာအချို့၏ စာအချို့ ထွက်လာသည်မှတပါး အကျိုးမထွန်းပါ။
တော်လှန်ရေးကောင်စီသည် အသွင်အားဖြင့် စစ်ကောင်စီကဲ့သို့ ဖြစ်နေပေသည်ကို မလိုလားကြချေ။ တော်လှန် ရေးတရပ်ကို တော်လှန်ရေးသဘော လက္ခဏာဆောင်သော နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတရပ်ကသာ ဦးဆောင်သင့် ပေသည်။ ထိုကြောင့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်နှင့် အညမည လူနှင့် လူပတ်ဝန်းကျင် သဘောတရားစာတမ်း သည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ မူဝါဒ ဖြစ်သည်ဟု ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၇) ရက်နေ့မှာ ကြေညာပါသည်။
ဆိုရှယ်လစ် ညီညွတ်မှုဟူသည်မှာ လူတဦးစီ၊ တစုစီတို့၏ စိတ်ဆန္ဒနှင့် အားထုတ်မှုက တဘက်၊ လူ့အဖွဲ့စည်း ကို ဗဟိုက ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုဟူသော ဝေါဟာရကို ကျောချမ်းမိကြသည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံလိုအပ် သည်မှာ ညီညွတ်မှု ဖြစ်ပေသည်။ သတင်းစာ လွတ်လပ်မှုဟူသည်မှာ သွေးခွဲမှု ဖြစ်သည်။ သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့် အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ပါ။ အမျိုးသား တိုးတက်စည်ပင်ရေးအတွက် လွတ်လပ်ခွင့်ကို နောက်တန်းသို့ ပို့ရပေမည်ဟု ပါတီဆရာများက လမ်းစဉ်ချပြီး စာနယ်ဇင်းတို့ကို အမှည့်ချွေ ချွေပါတော့၏။ စာပေလောကကို အစိုးရက ချုပ်ကိုင်ရန် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းပါသည်။ (၁) ပြန်ကြားရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သော ဥပဒေများ ပြဌာန်းခြင်း။ (၂) ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံထူထောင်ရေးတွင် လုပ်သားပြည်သူများ တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားရေး လုပ်ငန်းနှင့် (၃) ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို ကာကွယ်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းသည် ဆိုပါသည်။
အစိုးရပိုင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန်စာပေအသင်းကြီးက နှစ်စဉ်ပေးမြဲဖြစ်သည့် စာပေဆုများနှင့် ပတ်သက်သည့် မူကိုလည်း ပြင်ဆင်သည်။ စာပေတခု၊ တရပ်သည် (၁) မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကို ထောက်ခံရမည်။ (၂) မြန်မာ့မူ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို စစ်မှန်စွာ ခေါင်းဆောင်ရမည်။ (၃) စာဖတ်သူများကို မျိုးချစ်စိတ် နိုးကြွစေရမည်။ (၄) စိတ်ကူးဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် စာရိတ္တတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရမည်။ (၅) စာဖတ်သူများကို မှန်ကန်သော ဗဟုသုတကို ပေးစေရမည်ဟု စည်းကမ်းချမှတ်သောကြောင့် စာကောင်းပေမွန်များ လျော့ပါးသွား ပြီး အစိုးရနှင့် ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်ကို ၀ါဒဖြန့်သည့် စာမူများသာ ဆုရစာပေဖြစ်လာပါသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မေလမှ စတင်ပြီး ရွှေသွေးဂျာနယ်ကို စတင်ထုတ်ဝေပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် ရွှေသွေးဂျာနယ်ကိုပါ ဖြန့်ချီသည်။ အယ်ဒီတာချုပ်မှာ ဦးစောဦး ဖြစ်ပါသည်။ အလံဖြူကွန်မြူနစ်အဖြစ် တောခိုသွားပြီးမှ စစ်တပ်နှင့် ပြန်ပေါင်းကာ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးစာများကို ရေးနေသော ထူးဆန်းသည့် သတင်းစာဆရာဖြစ်ပါသည်။ အညမည သဘော တရားကို ရေးသူက အလံနီလူထွက် ကိုချစ်လှိုင်ဖြစ်ပါ၏။
ဦးစောဦး၊ ကိုချစ်လှိုင်တို့နှင့် များစွာ ရင်းနှီးသူ တည်မြဲပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း သခင်ချစ်မောင်က “မင်းတို့နှစ်ယောက်က ဗိုလ်ချူပ်ဈေးက အိမ်သာတွေမှာ မိန်းမသွားရန်၊ ယောက်ျားသွားရန် ဆိုင်းဘုတ်ရေးပေး တဲ့ လူနဲ့ အတူတူပါပဲကွာ” ဟု မျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး နောက်ပြောင်ဝေဖန်တာကို ကြားရဖူးပါသည်။ မည်သူက မည်သို့ဆိုစေကာမူ စစ်တပ်၏ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွင် ပြင်းထန်သော ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင် ရေးစာပေများကို ရေးသားသည့် ကွန်မြူနစ်လူထွက်နှစ်ဦးအဖို့ စစ်အစိုးရများ တက်နေသမျှ မြှောက်စားခံရသူ များ ဖြစ်ကြသည်။ နိုင်ငံခြား ကြေးနန်းကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း ထောင်ကြရအောင်လားဟု ၁၉၆၃ ခု၊ ဧပြီလ နေ့တနေ့တွင် ဂါးဒီးယန်းဦးစိန်ဝင်းက ပြောသောအခါ တင်မောင်က ရယ်ပါသည်။ “မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့က ပုဂ္ဂလိက စာနယ်ဇင်းတွေကို တိုက်နေတယ်လေ” ဟု ဖြေတော့ “ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲ၊ ဟောဒီမှာကြည့်” ဆိုကာ ငွေစက္ကူထုပ် တထုပ်ကို ပြသည်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးစောမြင့်ကို တိုင်ပင်တော့ အရပ်သားပိုင် သတင်းကိုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းကို အစိုးရက လက်ခံမည်ဟု ပြောပြီး သူကပါ လျှို့ဝှက်အစုရှင်အဖြစ် ပါရစေဟု ငွေပေးလိုက်သည်ကို သိရသဖြင့် စိတ်ဝင်စားမိသည်။
ဗိုလ်စောမြင့်က မဆလပါတီ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဖြစ်သဖြင့် ပုဂ္ဂလိက စာနယ်ဇင်းများအပေါ် ထားရှိသည့် ပါတီ၏ မူဝါဒတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရှိသေးသည်ကို သိရသဖြင့် အားတက်ပြီး အားတက်သရော ကြိုးစားခဲ့မိသည်။ မြန်မာပြည်မှာ သတင်းစာတွေ များပြားသော်လည်း စရိတ်စက ကြီးမားသောကြောင့် နိုင်ငံခြားကြေးနန်းသတင်း လုပ်ငန်း မထွန်းကားခဲ့ပါ။ စစ်အတွင်း အင်္ဂလိပ်တပ်များ ၀င်လာစဉ်က အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်က Rangoon Liberator အမည်နှင့် အင်္ဂလိပ်စာသတင်းစာတစောင် ထုတ်ခဲ့သည်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ရပ်သောအခါတွင် ထိုသတင်းစာကို အရပ်သားများကို ရောင်းချရာ ၀န်ကြီးဦးတင်ထွဋ်က ၀ယ်ယူပြီး The news time of Burma အမည်နှင့် ထုတ်ပါသည်။ သတင်းစာနှင့်အတူ ပါလာသည့် အမေရိကန်သတင်းဌာန အေပီကို တဆင့်သတင်းဖြန့်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဗမာ့ခေတ်ဦးအုန်းခင်နှင့် ရန်ကုန်သတင်းစာ ဦးအောင်မြင့်တို့က ဦးစီးပြီး Burma Press Syndicate ကို ၁၉၅၀ ခုနှစ်က စတင်ဖွဲ့ပြီး ရိုက်တာကို ၀ယ်ပြီး တဆင့် သတင်းဖြန့်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်မှ UPI နှင့် ပြင်သစ်မှ AFP နှင့် ရုရှသံရုံးမှ အခမဲ့ ဖြန့်သော တပ်စ် သတင်းစဉ်နှင့် တရုတ်သံရုံး၏ ဆင်ဟွာတို့ ပေါ်လာ ပါသည်။ နိုင်ငံခြားသတင်းဖြန့်ဝေရေးမှာ အမြတ်မရသော်လည်း သြဇာကြီးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသတင်းစဉ်ကို တည်ထောင်ရန် အားထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဂါးဒီယန်းသတင်းစာတိုက် အပေါ်ထပ်တွင် သတင်းဌာနရုံးကို ဆောက်လုပ်ကြပါ၏။ အစုများ ရောင်းသောအခါ သတင်းစာအားလုံးက ၀ယ်ကြရာတွင် မန္တလေး လူထုဦးလှ က (၁၀၀၀)တန် အစု (၃) စု ၀ယ်ပါ၏။
တပ်စ်သတင်းဌာနက အင်အားကြီးစွာ အားပေးပါသည်။ မော်စကိုမှ အကြီးအကဲကိုယ်တိုင် လာရောက်ဆွေးနွေး ပြီး သတင်းဖမ်း တယ်လီပရင်တာစက်များ၊ ရေဒီယိုများ လေယာဉ်ပျံ တစီးစာဖိုးပေးပြီး အခမဲ့ ငှားရမ်းသည်။
သတင်းဌာနဖွင့်တော့မည်ဟု ကြေညာသောအခါ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက “ရပ်လိုက်ကြပါဗျို့” ဟု ဖုန်းဆက် ပါသည်။ သတင်းလုပ်ငန်းကို ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးရမည်လားဟု ဗိုလ်နေ၀င်းက ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ကို ဆူသည်ဟု သိရပါ၏။
သတင်းစဉ်ထောင်ရန် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၀န်ကြီးက နောက်ထပ်မပြောတော့ပါ။ သူထည့်ထားသော ငွေ (၅၀၀၀) ကို ပြန်မတောင်းတော့ပါ။ တင်မောင်လည်း ငွေ (၅၀၀၀) ဆုံးပါ၏။ တရားဝင် အစုဝယ်သဖြင့် အခွန်တော်မှ လျှော့ခွင့်ရစေကာမူ ခိုးဝင်ပြီး အစုဝယ်သူ ၀န်ကြီးမှာ သနားစရာကောင်းလှပါသည်။ ပြည်သူပိုင် နိုင်ငံခြားသတင်းဖြန့်ချီရေး လုပ်ငန်းအဖြစ် မြန်မာ့သတင်းစဉ်ကို ၁၉၆၃ ခု၊ ဇူလိုင်လ (၂၆) ရက်နေ့မှာ တည်ထောင်ပါသည်။ ကြီးကဲသူ စစ်ဗိုလ်က ဤလုပ်ငန်းကို သိကြသော တင်မောင်နှင့် ဦးစိန်ဝင်းတို့အား တိုင်ပင် မှုမပြုသဖြင့် မူပိုင်ခွင့်အဆများစွာ ပိုမိုပေးရပါသည်။ ပုဂ္ဂလိက တည်ထောင်ပါက တလ (၁၀၀) ခန့် ကုန်ကျမည့် လုပ်ငန်းကို တလ (၈၀၀) ခန့် အဆများစွာ ပေးရပါ၏။ ။
Posted by Thet Oo at 7:29 PM No comments:
ကျောင်းသားများကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်လိုက်သောကြောင့် နိုင်ငံတခုလုံး တုန်လှုန်သွားပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်၏ အန္တရာယ် သတိပြုမိလာကြသည်။ အာဏာမသိမ်းမီက အစိုးရပါတီဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုပါတီနှင့် တကွ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အားလုံးတို့ နှုတ်ပိတ်သွားကြရတော့သည်။
သတင်းစာများကလည်း သတိကြီးစွာထားပြီး ရေးသားကြခိုက်တွင် အစိုးရဌာနများ၌ အထူးအရာရှိများအဖြစ် နေရာယူလာကြသော စစ်ဗိုလ်များနှင့်လည်းကောင်း၊ နယ်တို့တွင် အုပ်ချုပ်ကြသော စစ်ဗိုလ်များနှင့် လည်းကောင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ကြလေတော့သည်။ ဗွေဆော်ဦး ခံကြရသူများမှာ ပြည်မြို့မှ သတင်းထောက် ငါးဦးဖြစ်ကြသည်။ ရန်ကုန်သတင်းစာများတွင် ထိုနေ့ဖော်ပြသော ပြည်မြို့သတင်းတပုဒ်ကို မကျေနပ်ဟု ဆိုကာ ပြည်မြို့ကို အုပ်ချုပ်သော စစ်ဗိုလ်က ထိုသတင်းကို မည်သူက ပေးသနည်းဟု မေးသည်ကို စာနယ်ဇင်းတို့ ကျင့်ဝတ်အရ ဖော်မပြောကြသောကြောင့် ဖမ်းလိုက်လေသည်။ သတင်းစာဆရာအသင်း ဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်းနှင့် ဒု-ဥက္ကဌ ဖြစ်သော တင်မောင်တို့သည် မိုင် (၁၅၀) ခရီးကို ကားမောင်းသွားကြသည်။ ဖမ်းဆီးသူ စစ်ဗိုလ်ကို တွေ့ဆုံပြီး စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်ကို ရွတ်ဆိုပြီး လွှတ်ပေးပါဟု တောင်းပန်ကြရသည်။ မရပါ၊ နောက်ဆုတ်ခဲ့ရသည်။ နည်းမှန်လမ်းမှန်နျင့် အရေးဆို၍ မရလေသဖြင့် ဦးစိန်ဝင်းက ရန်ကုန်တွင် ရှိသော ဗိုလ်မှူးကြီးများ၏ အိမ်များသို့ နောက်ဖေးပေါက်မှ တက်ပြီး နားလည်မှုယူလေမှ၊ အထက်က ဖိအားပေးလေတော့မှ ခမျာများကို လွှတ်ပေးသည်။
သတင်းပေးသူအမည်ကို သိလိုသောကြောင့် သတင်းထောက်များကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးသည်မှာ နည်းလမ်း မမှန်ပါဟု သတင်းစာဆရာအသင်းက အစိုးရကို ပန်ကြားလွှာ တင်ကြသည်။ အကြောင်းမပြန်ဘဲ နေခဲ့ရာမှ နောက်ပိုင်းတွင် ၀န်ကြီးများ ရုံးစိုက်သော ရန်ကုန်မြို့တော်မှ သတင်းစာအယ်ဒီတာချုပ်ကြီးများကို ဖမ်းဆီးပြီး သတင်းပေးသူကို ထုတ်ပြောရမည်ကို စစ်ဆေးသည်ကို ခံကြရလေတော့သည်။
အမှုမှာ တော်လှန်ရေးကောင်စီ အဆင့်လေးတွင် ရှိသူ လေတပ်ဗိုလ်ချုပ် တီကလစ်က ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေးစနစ် ဆိုသည်ကို မယုံကြည်သောကြောင့် ခေတ္တခဏသာ ဗိုလ်နေ၀င်းက ပေးသော သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ပြီး ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်လိုက်သည်။ ယင်းသတင်းကို အိုးဝေသတင်းစာနှင့် မိုးကြိုးသတင်းစာတို့က ဖော်ပြကြသည်။ သတင်းမှန်ဖြစ်စေကာမူ ထိုသတင်းကို ပေးသူသည် မည်သူဖြစ်သည်ဟု သိလိုသည်ဆိုကာ မိုးကြိုးအယ်ဒီတာ ဗမာ့ခေတ်ဦးအုန်းခင်၊ သတင်းထောက် ကိုခင်မောင်ကလေးနှင့် အိုးဝေအယ်ဒီတာ ဦးညိုမြတို့ကို ဖမ်းဆီးသည်။ သူတို့အား စစ်စုံထောက်တို့က ဖမ်းဆီးပြီး အကျဉ်းထောင်သို့ မပို့ဘဲ စစ်စုံထောက်များက ညှဉ်းဆဲစစ်မေးသော စခန်းတွင် စစ်ဆေးသည်။ ရှေးအစဉ်အဆက်က သတင်းစာဆရာများကို ဖမ်းလျှင် ရဲတို့က ဖမ်းပြီး အရပ်သား ထောင်သို့ ပို့ကာ တရားရုံးသို့ တင်လေ့ရှိသည်။ သူတို့သုံးဦးကို ရုံးသို့မတင်ဘဲ တလကျော် စစ်ဆေးပြီးမှ ပြန်လွှတ်လိုက်သည်။
`သတင်းစာများ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တာဝန်သိကြပါ´ ဟု ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး စိုးမြင့်က ပြန်ကြားရေးဌာနက ဦးစီးကျင်းပသော နယ်သတင်းထောက်များ ညာဏ်သစ်လောင်း သင်တန်းမှာ မိန့်ခွန်းပေးသည်။ သင်တန်းဆရာ ပညာရှင်များက လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ကို အလေးထားပြီး သင်ကြားကြ သောကြောင့် အစိုးရနှင့် ဆရာများ မူဝါဒ မတူကြသဖြင့် သင်တန်းသားများ မျက်စိလည်ကြရလေသည်။
နယ်သတင်းထောက် (၆၀၀) ခန့်ကို သင်တန်းပေးပြီးနောက် သတင်းထောက်များကို ချုပ်ကိုင်သော သတင်းထောက်မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်များကို ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ထုတ်ပေးသော လက်မှတ်ကိုသာ တရားဝင် အသုံးပြုကြရမည်ဟု အမိန့်ထွက်လာသည်။ တော်လှန်ရေး အစိုးရတက်လာချိန်မှ စတင်ပြီး အစိုးရ မှန်သမျှကို စစ်သားများက စောင့်စေကာမူ သတင်းထောက်များက မိမိတို့ လုပ်ကိုင်သော သတင်းစာတိုက်မှ ထုတ်ပေးသော လက်မှတ်များနှင့် သတင်းဖြစ်ပွားရာ ဒေသများ၊ အစိုးရရုံးများတွင် ၀င်ထွက်သွားလာနိုင် သောကြောင့် ပြန်ကြားရေးဌာန၏ လက်မှတ်ကို လျှောက်ထားရယူလေ့မရှိကြပေ။ အမိန့်သစ်အရ သတင်းစာ တိုက်များက ထုတ်ပေးသော လက်မှတ်များ တရားမ၀င်ဖြစ်ရသဖြင့် အမိန့်အတိုင်း လက်မှတ်သစ်များ လျှောက်ထားရလေသည်။
တစတစ အသေးအဖွဲ တင်းကြပ်မှုကလေးများက စလာပြီး ကြီးမားသော နှောင်ကြိုးကြီးများက တည်းလာ လေတော့သည်။ ပုံနှိပ်တိုက်ဥပဒေများ အမျိုးမျိုးအစားစား ရှိနေသည်ကို ရှင်းလင်းသော ဥပဒေတမျိုးတည်း ပြုစုပေးပါဟု အစိုးရ အစဉ်အဆက်တို့ထံ သတင်းစာများက တောင်းဆိုခဲ့သည်ကို တော်လှန်ရေးအစိုးရက လိုက်လျောလိုက်သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ပုံနှိပ်တိုက်များ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို အတည်ပြုထုတ်ပြန်သည်။ ဥပဒေ တခုတည်းကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သဖြင့် အသွင်သဏ္ဌာန်က သတင်းစာတို့၏ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အနှစ်သာရမှာ အလွန်အမင်း ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထား၏။
ဥပဒေအဟောင်းအရ ပုံနှိပ်တိုက်ရှင် တဦးအဖို့ ခရိုင်ရာဇ၀တ်တရားသူကြီးတဦးထံ သွားရောက်၍ ပုံနှိပ်တိုက် တည်ထောင်လုပ်ကိုင်ပါမည်ဟု ကြေညာပြီး မှတ်ပုံတင်လျှင် မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းကို အစဉ်တဆက် လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ ဥပဒေသစ်အရမူ ပုံနှိပ်သူတဦးအဖို့ တနှစ်တကြိမ် မှတ်ပုံတင်ရမည် ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ် မှာ ပုံနှိပ်ခွင့်လိုင်စင်၏ သက်တမ်းကို တနှစ်သာပေးထားသည်။ တနှစ်အတွင်း သူတို့မကြိုက်လျှင် ပုံနှိပ်လုပ် ငန်းရှင်အဖို့ နောက်ထပ် လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိတော့ပေ။ သတင်းစာဆရာတို့အား `မင်းတို့အသက် တို့လက်ထဲမှာ ဟေ့၊ မင်းတို့သက်တမ်းဟာ (၁၂) လသာ ရှိတယ်´ ဟု စစ်ဗိုလ်များက ခြိမ်းခြောက်နေသည့် ဥပဒေဖြစ်သည်။ မရေရာသော လုပ်ပိုင်ခွင့် သက်တမ်း တနှစ်သာရှိသော မိမိဘ၀ကို စဉ်းစားမိတိုင်း စာမရေးရဲကြတော့ပါပေ။
`တယ်ကြမ်းတဲ့ ဥပဒေပါလား´ ဟု ညည်းညူခဲ့ကြသော ထိုဥပဒေကို ၁၉၈၉ ခု၊ န၀တ စစ်အစိုးရခေတ်မှာ ထပ်ပြီးနောက် ၀က်အူတင်းသည့် ပြင်ဆင်ချက်ကို ပြုပြန်သေးသည်။ ဥပဒေအရ ပြစ်မှုကျူးလွန်သော ပုံနှိပ်တိုက်ရှင်များကို ချမှတ်သည့် ဒဏ်ငွေကို တိုးမြှင့်သည်။ `အေးလေ… မပြင်လို့ မဖြစ်ဘူးလေ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်က အစိုးရက အင်တိုက်အားတိုက် အစွမ်းကုန်ချမှတ်တဲ့ ဒဏ်ငွေအတိုင်းအတာက န၀တခေတ်မှာ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်နေလွန်းတော့ ဆေးပေါ့လိပ် တလိပ်ဖိုးသာ ရှိနေတာကိုး´ ဟု လှောင်ကြသည်။
၁၉၆၂ ခု၊ ပုံနှိပ်တိုက် ဥပဒေကြီးအလိုအရ ပုံနှိပ်တိုက်များကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ရန် ပုံနှိပ်တိုက်များ မှတ်ပုံတင်ရုံးနှင့် စာပေစီစစ်ရေးရုံးတို့ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည်။ အစဉ်အဆက် စာနယ်ဇင်းရေးရာများကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက ကွပ်ကဲခဲ့သောမူကို ပြင်သည်။ စာပေကိစ္စသည် နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေး ကိစ္စဖြစ်သည်။ အရေးယူရန် ဖမ်းဆီးရန် ရှိလျှင်လည်း ရဲတို့က ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်ဟု အကြောင်းပြပြီး စာနယ်ဇင်းလောကကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက အုပ်ချုပ်စေသည်။
စောစောပိုင်းက စာပေစိစစ်ရေးရုံးက ပုံနှိပ်ပြီးသမျှ စာအုပ်များကိုသာ စိစစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပုံမနှိပ်မီ စာမူများကို တင်ကြိုစိစစ်သည်။ မိတ္တူလေးခု တင်ကြရသည်။ သူတို့မကြိုက်သော စာသားမှန်သမျှကို ဖြတ်တောက်သည်။ စာသားများသာမက မျက်နှာဖုံး ပန်းချီကားများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ရုပ်ပြောင်များကိုပါ ဆင်ဆာ လုပ်တော့သည်။ ၀တ္ထု၊ ကဗျာ၊ ပြဇာတ်၊ ဘာသာရေး၊ သမိုင်း … စသော စာပေများသာမက ဆပ်ပြာချက်နည်း စာအုပ်ကိုပါ သူတို့က တင်းကြပ်စွာ ဆင်ဆာလုပ်ကြသည်။
မည်သို့သော စာများကို မည်နှယ် စိစစ်ဖြတ်တောက်သနည်းဟူမူ ဥပမာ… `၀တ္ထုတခုတွင် ကားဆိပ်တခု၌ နှစ်လိုဖွယ်လှပသော အမျိုးသမီးငယ်တဦးကို စစ်ဗိုလ်ကလေးတယောက်က မြင်တွေ့ရာမှ မြင်လျှင်မြင်ချင်း ချစ်မိရှာသည်´ ဟု စာရေးဆရာတဦးက စာဖွဲ့သည်ကို ဖြတ်တောက်သည်။ ဆင်ဆာအရာရှိက အကြောင်းပြ သည်မှာ `တပ်မတော်အရာရှိ စစ်ဗိုလ်တို့သည် မိန်းမတဦးကို မြင်လျှင်မြင်ချင်း ချစ်ကြိုက်လေ့မရှိ၊ `သာမိကာ၊ အ သာမိကာ´၊ လွတ်လပ်သူ ဟုတ်၏၊ မဟုတ်၏ သိရှိမှသာ ချစ်မေတ္တာမိုး၊ ရွာဖြိုးလေ့ရှိတယ်´ ဟူ၏။
တခါတရံတွင် ထိုကဲ့သို့ အသေးစိတ်စစ်ဆေးသည့်ကြားက သူတို့မကြိုက်သော စာပိုဒ်ကို သူတို့ မမြင်လိုက် သဖြင့် လွတ်သွားကာ ထိုစာပိုဒ် ပါလာပါက ပုံနှိပ်ပြီး စာအုပ်မှ စာမျက်နှာကို ဆွဲဖြဲပေးရသည်။ မင်နှင့် သို့မဟုတ် ငွေမင်သုတ်ပေးရသည်လည်း ရှိသည်။
သတင်းစာများအဖို့ အချိန်မီ ပုံနှိပ်ရသဖြင့် စိစစ်ခြင်းမှာ ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ သို့သော် ပိုမို၍ စိတ်ညစ်ရသည်။ သူတို့ မကျေနပ်သော သတင်းများ၊ စာပိုဒ်များ ပုံနှိပ်မိပါက နောက်တနေ့တွင် အယ်ဒီတာ များကို ဆင့်ခေါ် ကြိမ်းမောင်းတော့သည်။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်များ အုပ်စိုးသော ခေတ်က မိမိတို့ ရေးသမျှ စာမူတွေကို ဆင်ဆာရုံးတင်ပြီး ခွင့်ပြုလေသမျှ ပုံနှိပ်ရသည်က သက်သာသည်။ ဘေးကင်းသည်။
ယခုမူ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလို ပြန်ကြားရေးမှ စစ်ဗိုလ်ကလေးများက သတင်းစာဆရာကြီးများကို သူတို့၏ ရုံးသို့ ဆင့်ခေါ်ပြီး `လူကြီးမင်းတို့ ရေးတာ ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ပေါက်နေတယ်။ ဘယ်နည်းသွေဖည်နေတယ်´ ဟု ဆွေးနွေးဝေဖန်သဖြင့် စိတ်ညစ်ကြရသည်။ အချို့စစ်ဗိုလ်က ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောသည်။ တချို့ကမူ များစွာ ရိုင်းပျသည်။ ယဉ်ယဉ်ပြောသည်ဖြစ်စေ၊ ရိုင်းရိုင်းပြောသည်ဖြစ်စေ အနှစ်သာရမှာ ခြိမ်းခြောက်ကြ သည်သာ ဖြစ်၏။
တင်မောင်အပါအ၀င် အယ်ဒီတာကြီးများအဖို့ `ခေတ္တခဏ ဆွေးနွေးပါရစေ´ ဟု ဖိတ်ကြားချက်ကို ရလေတိုင်း စိတ်မချမ်းသာ ဖြစ်ကြရသည်။ သူတို့၏ ကောက်ချက်များ မမှန်ကန်သည့် အကြောင်း ပြန်လည် ဖြေရှင်းသည်ကို နားလည်နိုင်သည့် ပညာအရည်အချင်း မရှိလေသဖြင့် ပိုမိုဆိုးသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဖိနှိပ်နေသည့် အကြားတွင် ပုံနှိပ်သူများ ဖောင်းပွလာသည်။ တော်လှန်ရေး အစိုးရခေတ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရှားပါးလေသောကြောင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းကို ၀င်ရောက်လာ သူ များပြားလာသည်။ ယခင်က ဤလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်သူ (၄၀၀) ခန့်သာ ရှိခဲ့သည်။ စစ်ဗိုလ်များနှင့် အဆက်ရှိသူများက ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသဖြင့် တော်လှန်ရေး စစ်အစိုးရခေတ်တွင် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းရှင် (၁၂၇၄) ဦး၊ ထုတ်ဝေသူ (၆၆၅၆) ဦး အထိ ပွားများလာသည်။ ။
Posted by Thet Oo at 4:17 PM No comments:
Posted by Thet Oo at 11:35 AM No comments: